Isondlo esifanelekileyo ebomini bomntu
Akukho mntu omnye ongafuni ukuba uphilile, akafuni ukuba nomoya omhle kwaye akayi kuhlala ixesha elide. Nangona kunjalo, indlela yobomi kunye nemikhwa yabantu abaninzi ibonisa ukuba abafuniyo, abafuniyo kwaye abayizinjongo zabo.
Ukucacisa ukuphikisana okunjalo kulula. Omnye umnqweno akwanele. Kwakhona kuyimfuneko ukwazi indlela yokufezekisa le nto kwaye ulandele imigaqo ethile. Ubomi kunye nokuhlala kwexesha kuxhomekeka kwiimeko ezininzi, eziphambili zazo, okokuqala, ukutya okunempilo, indlela yokuqhelanisa yomsebenzi kunye nokuphumla, umsebenzi wokwenza umsebenzi. Ubulumko baseMpumalanga yasendulo ithi: "Siyinto esiyidlayo". Yile ndlela ecacileyo, emfutshane neyifanelekileyo eyenza ukuba ubomi bethu buxhomekeke.
Isondlo esifanelekileyo ebomini babantu sidlala indima ephambili, kwaye yinto ephambili yokuphila ixesha elide, impilo enempilo kunye neemeko ezintle. Zininzi zeencwadi, amanqaku, iinkqubo zethelevishini, iintetho zeengcali kunye nezondlo zizinikele kwesi sihloko.
Ukutya esiyidlayo kufanele kube nokulinganisela, oko kukuthi, kuqulethe iikhalori ezaneleyo, iiprotheni, amafutha kunye nama-carbohydrates, kunye namavithamini kunye neemaminerali ukubonelela umzimba wethu ngamandla kunye nezinto eziyimfuneko zokwakha nokuvuselela iisculi kunye neeseli. Mhlawumbi kuya kubonakala kuyamangalisa kwaye kuyinto engakholekiyo, kodwa ukuba uhlawula ngokwaneleyo ukutya okunomsoco ebomini bomntu ukususela ekuqaleni, ininzi (ewe, ininzi) izifo ezenzekayo kubantu abadala zingagwenywa. Ngoko ke, ukuze kulungiswe ukutya okunempilo, ezi migaqo-siseko ezilandelayo kufuneka zigcinwe.
Umgaqo wokuqala ebomini bomntu kufuneka uhlale uhlala. Okokuthi, ukutya okufunekayo kuyenze imihla ngemihla ngexesha elithile lemihla, njengoko le mkhuba ibangela ukuhlaziywa kwengcamango xa umzimba uqala ukulungiselela ukutya ngexesha elithile: i-saliva, i-bile iveliswa, kwaye isantya sesantya siveliswa ngokuyimfuneko ukuze kugcinwe ukutya okupheleleyo komzimba. Ngaloo ndlela, iingcamango eziphunyeziweyo zokufumana kunye nokuqhelaniswa kokutya ngexesha elithile lonyaka ziququzelela umsebenzi wezitho zokutya
Umgaqo wesibini obalulekileyo apho isondlo esifanelekileyo isekelwe ukuhlukana, oko kukuthi, ukutya okufunekayo kufuneka kwenziwe maxesha amaninzi ngemini: ubuncinane ezintathu, kwaye mhlawumbi maxesha amane. Oku kwahlukana kwimihla yokutya kwimizuzu emininzi kuvumela ukuba umzimba uphumelele kwaye uyanciphisa umthwalo kwizitho zokutya. Ucwaningo olutshanje lwenzululwazi luye lwaqinisekisa ukuba ukutya enye okanye kabini ngosuku kwandisa ingozi yesifo senhliziyo kunye ne-pancreatitis, njengoko izitho zethu zokugaya kufuneka zisebenze ngokugqithiseleyo ukuze zivuselele kwaye zifake umthamo omkhulu wokutya - iingxaki zempilo.
Ubuncinci ebomini bomntu ngumgaqo wesithathu wombutho wezondlo, ngokubhekiselele ekufuneka ukutya kulungelelaniswe nokubunjwa kwawo, oko kukuthi, ziqulethe izondlo eziyimfuneko (iiprotheni, amafutha kunye ne-carbohydrates), iivithamini kunye neemaminerali ngokulinganayo. Ngokukodwa, umlinganiselo phakathi kwamaprotheni, amafutha kunye nee-carbohydrate kufuneka zigcinwe ngolu hlobo lulandelayo: abantu ababandakanyekayo kwizakhono zomsebenzi kufuneka badle amafutha amaninzi kunye nama-carbohydrates kunye nokusetyenziswa kwamaprotheni afana nokuxhatshazwa kwabantu abahlala bemizimba yengqondo, ecaciswa kukuba amandla ethu umzimba ufumana ngokuhlula i-carbohydrates kunye namafutha, kanti iiprotheni zisetyenziswe njengento yokwakha yomzimba.
Ukongezelela ekuqwalaseleni imigaqo emithathu yokuqala ekhankanyiweyo ngasentla kwisondlo esifanelekileyo ebomini babantu, kuyafuneka kwakhona ukuhambelana nomgaqo wokusabalalisa ukutya okuthathiweyo ngexesha lemihla yeendidi ezahlukileyo. Ukutya okuthathu ngosuku, olu luncedo kakhulu lulandelayo: isidlo sasekuseni kufuneka ilandele malunga nesithathu kwisithathu semini yesidlo, ngesidlo sasemini - esincinci ngaphezu kweyesithathu kunye nesidlo - esingaphantsi kwengxenye yesithathu yemihla ngemihla. Ngelo xesha, isidlo sokugqibela kufuneka sibe ubuncinane kwiiyure ezintathu ngaphambi kokulala.
Kuye kwimigaqo enjalo yentlangano kunye nolawulo lokutya ebomini kufuneka lube ngaphantsi. Ukuthobela kwabo kufuneka kube ngumthetho. Ngaphezu koko, ukubambelela kule miyalelo elula, unokwandisa ubomi kunye nokugcina impilo kwiminyaka emininzi.
Ukubunjwa kokutya okumele kudliwe kufuneka kube ngolu hlobo lulandelayo.
Njengomthombo weprotheni, okokuqala, inyama yezilwanyana (inyama yenkomo kunye neenkukhu), i-cottage shizi, iimveliso zobisi ezivutyiweyo (kefir, bifid), iintlanzi, iimbotyi (ubhontshisi, iigasi, i-soy, i-nut) kufuneka zibe khona ekudleni. Iiprotheni, njengoko siyazi, ebomini babantu zibambe indima ebalulekileyo, njengoko umzimba uhlaziywa rhoqo. Yingakho iiprotheni zenzululwazi zibizwa ngokuba ngama-protein, oko kukuthi, zizona ziprotini eziphambili.
Amafutha ngumthombo oyintloko wamandla, kwaye, ngaphezu koko, ugcino olutyebileyo emzimbeni lusikhusela kwiqanda, kunye nezitho zangaphakathi ezivela kumonakalo owenziwe ngomatshini. Uninzi lwamafutha lufumaneka kwioli yezilwanyana kunye nemifuno, ukhilimu omuncu, ukhilimu, ingulube, imvana. Nangona kunjalo, akufanele usebenzise kakubi ukutya okunamafutha, njengoko oku kungakhokelela kwizifo zesimo senhliziyo.
I-carbohydrates idilizwe lula kwaye ngoko isebenza njengomthombo osisiseko wamandla. Uninzi lwe-carbohydrate lufumaneka kwizityalo kunye nemifuno, kunye nemifuno nezithelo. Ngomsebenzi wengqondo, i-carbohydrates iyadingeka.
Imveliso emininzi ingentla ibamba indima ebalulekileyo ebomini babantu, njengoko zicebile kwiimbiwa kunye nokulandelelanisa izinto, ezifana ne-phosphorus, i-magnesium, i-potassium, i-sodium, isiconi, i-iodine, i-zinc, ithusi kunye nabanye abaninzi abathatha inxaxheba kwiinkqubo ze-metabolic i-hormone, oko kukuthi, benza umsebenzi olawulayo kwiinkqubo ezenzeka emzimbeni. Imifuno kunye neziqhamo, kunye nesibindi sezilwanyana kunye neentlanzi, nazo ziqulethe iivithamini, ezifana ne-microelements, aziyiyo imithombo yamandla, kodwa zikhonza njengomlawuli kunye ne-catalyst for all processes metabolic in body without exception. Ngako oko, isondlo esifanelekileyo ayikwazi ukucingelwa ngaphandle kwezi zinto eziqulethwe kukutya.
Izithelo ezomileyo - umxube wevithamini
Matshi 8 esikolweni: imincintiswano, izipho
Iibiscuits "amaNotshi aseNorway"
Chaza isicwangciso sokufunda kwamanye amazwe
Umvuzo "I-mushroom Glade"
Umncintiswano wamaRoma ovela eLamoda
I-Beef Tuna Soup
Ukuba ungeke ube ngumama: ukudandatheka okanye yonke into iya kulungile?